ကိုသန်းလွင် - ဒေဝါလီခံရသောကုမ္ပဏီများ - MoeMaKa Media
Home / Coronavirus / Currents / Features / Ko Than Lwin / ကိုသန်းလွင် - ဒေဝါလီခံရသောကုမ္ပဏီများ
ကိုသန်းလွင် - ဒေဝါလီခံရသောကုမ္ပဏီများ
Coronavirus, Currents, Features, Ko Than Lwin
(မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၂၀
Ref: Tidal wave of Bankruptcies Is coming, New York Times June 18 2020.
ကုမ္ပဏီကြီးငယ်မဟူ ကိုရိုနာရောဂါပြန့်ပွားခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးပျက်ပြားခြင်း၏ ဒဏ်ကိုအနည်းနှင့် အများခံ ရသည်ချည်းဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သော Hertz, J. Crew ကုမ္ပဏီများကအစ စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည့် Diamond Offshore Drilling နှင့် Whitting Petroleum စသည်တို့သည် ဒေဝါလီခံရမည့် စာရင်းတွင်ပါဝင်ကြပါသည်။
ထိုကုမ္ပဏီများ၏စာရင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်များလာဖို့သာရှိပါသည်။ Z.Score ကုမ္ပဏီမှ အပ်တမန်(Edward Atman) ဆိုသူက ကုမ္ပဏီများ၏ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုစောင့်ကြည့်ရသည့် အလုပ်ကိုလုပ်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်အနေ ဖြင့်(Mega Bankruptcies) ခေါ်ဒေဝါလီခံရသည့်စံချိန်တင်ရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ကုမ္ပဏီများ၌ ၁ ဘီ လီယံဒေါ်လာအထက်အကြွေးရှိသောကုမ္ပဏီများပါဝင်ပါသည်။ ၂၀၀၈ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း ပြီးကတည်း က အကြွေး ဒေါ်လာ ၁၀၀ သန်းထက်များသည့် ကုမ္ပဏီများဒေဝါလီ ခံရာတွင် စံချိန်တင်မည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
လအနည်းငယ်အတွင်းအခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်တိုင် ထိုကုမ္ပဏီများကို ကယ်တင်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကုမ္ပဏီများက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများမှာ ၄င်းတို့ကိုကယ်တင်၍ မရနိုင်လောက်အောင်ကြီး မား နေပါသည်။ Chesapeake Energy မှာ တချိန်ကနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခု အခါ အကြွေး ၉ ဘီလီယံမျှတင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Tailored Brand ခေါ် Men Warehouse, Jos A Bank. K&G ကုမ္ပဏီတို့၏ မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ ဒေဝါလီခံရန်ရုံးတော်သို့လျှောက်ထားရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ Weather -ford ကုမ္ပဏီမှာ လည်း ဒီဇင်ဘာလက ဒေဝါလီခံရမည့်ဘေးမှ လွတ်ကင်းခါစကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ယခုအခါသေချာ ပေါက်လျှောက်ထား ရတော့မည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ်က ဒေဝါလီခံသည့် ကုမ္ပဏီများကိုကာကွယ်သည့် ဥပဒေအခန်း ၁၁ ပါအကြောင်းအရာများနှင့် အကာအကွယ်ကိုယူကြမည့် ကုမ္ပဏီပေါင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်တွင် ၆,၈၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ ပါသည်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က ဖြစ်ခဲ့သော အထွေထွေအကျပ်အတည်း (Great Depression) ခေတ်မှစ၍အဆိုးဆုံးအဖြစ်ကုမ္ပဏီများ ပျက်စီးရ သည့် ကိန်းသို့ဆိုက်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများကိုကယ်တင်ရန် အတွက်ဆိုးရွားစွာတွေ့ကြုံရသည့် အများထဲမှရွေး ထုတ်ရန်ပင် မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်အရေအတွက် များပြားလွန်းနေသည်။
တချို့ကုမ္ပဏီများမှာသူတို့အကြွေးများကိုပေးရန်အချိန်ယူ၍ စီစဉ်ရပြီးကုမ္ပဏီများအနေအထားပြောင်း လဲကာ ဆက်လက်ဖွင့်ထားရန် ကြံစည်ကြသော်လည်း မဖြစ်နိုင်သည်ကများနေပါသည်။ များသော အားဖြင့်ဖြစ် နေသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရောင်းချ၊ အကြွေးဆပ်ပြီးလျင်ကုမ္ပဏီ ပျောက်သွားသည်ကများပါ သည်
တက္ကသိုလ်မှပရော်ဖက်ဆာများက ကွန်ဂရက် သို့မေလက စာရေးရာတွင် “လုပ်ငန်းအသေးစားကလေး များမှာ ပိတ်ပင်ရမည့်သဘောကိုဆောင်နေပြီး အလုပ်သမားအများစုမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတော့မည် “ဟု ရေး သားကြပါသည်။ အကြံပြုချက်များတွင် အနားယူသွားသောတရားသူကြီးများကို ပြန်ခေါ်ရန်နှင့် ဒေဝါလီတရားရုံး တွင် ရုံးစာရေးများကို ပိုမိုခန့်ထားရန်တို့ပါရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီများကိုလည်း မိမိဖါသာပြန်လည် ပြုပြင်ခွင့်ပေးရန် မိမိတို့ အနာဂတ်တွင် မည်သို့ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မည်ကိုသိနိုင်ရန်အတွက် အချိန်ကိုလုံလုံလောက်လောက် ပေးရန်တို့ပါဝင် ပါသည်။
ရောဂါပြန့့်ပွားမှုကြောင့်လော့ဒေါင်းလုပ်ရသဖြင့်ထိခိုက်ရသောကုမ္ပဏီများတွင် The Gym Chain 24Hr Fitness လည်းပါဝင်ပါသည်။ ၄င်းတို့က ယခုအပါတ်ထဲတွင် ဒေဝါလီခံရန်ပြင်ဆင်ကြရပြီး ၄င်း၏ဆိုင်ခွဲ ၁၀၀ ခန့် ကိုပိတ်ပစ်ရမည်ဟုဆိုပါသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်စားသုံးသူများ၏ အမှုအကျင့်များပြောင်းလဲရာတွင် ၄င်းတို့ ဆိုင်များမှာ ထိခိုက်ရသည် ဟုဆိုပါသည်။
ကားအငှါးလိုက် သောကုမ္ပဏီ Hertz အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကစ၍ ဘဏ္ဍာရေးပြသာနာများရှိ ခဲ့ရာယခုအခါ အူဘာ (Uber) နှင့် လစ် (Lyft) စသောအပြိုင်အဆိုင်များပေါ်လာသဖြင့် ဒေဝါလီခံရန်ဖြစ်လာ တော့သည်။
J. Crew နှင့် Neiman Marcus မှာ ယခင်ကထည်းက ကြွေးထူနေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၄င်းကိုအား ပေးကြသည့် စားသုံးသူများက အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်ကြသဖြင့် သူ၏ပရိတ်သတ်မှာ များစွာ လျှော့နည်းခဲ့ရသည်ဟု ပြောပါသည်။
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Diamond နှင့် Whitting တို့မှာကုမ္ပဏီချဲ့ထွင်ခြင်း ကြောင့် ယခင်ကကြွေးထူခဲ့သည့်အပြင် ယခုအခါ ရုရှားနှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့၏ ရေနံပိုထုတ်သည့် လုပ်ရပ်ကြောင့်စျေးတဟုန်တိုးလျှော့ကျရာမှ အခြေအနေကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ခြင်းဖြစ်ရပါသည်။
Borden Dairy နှင့် Dallas ကုမ္ပဏီတို့မှာ ၁၈၅၇ ခုနှစ်ကတည်းကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ကြပြီး ဇန်နဝါရီလက ဒေဝါလီခံကြောင်းကြေညာခဲ့ရသည်။ ၄င်းမှာထုတ်ကုန်များ၊ စျေးကျလာခြင်း စားသုံးသူတို့ ကြိုက် နှစ်သက်ကြသည့် အနေအထားပြောင်းလဲလာခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
ယခုနှစ်ပထမကွာတာမကုန်မှီ (မတ်လ) အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများက တင်ရှိနေသောအကြွေးမှာ ၁၀ ဒဿမ ၅ ထရီလီယံ မျှရှိသည်။ ဖက်ဒရယ်ရီဆာ့ဖ်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကအကြွေးများကို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းများမှ အကြွေးများမှာလည်း ထိန်းမရနိုင်လောက်အောင်များပြားနေပြီဖြစ်သည်။ ပင်စင် စားများ၏ပင်စင်ငွေများ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပစ္စည်းရောင်းထားသဖြင့်တန်ဖိုးပေးချေခြင်းကိုစောင့် ဆိုင်းနေသောစျေးဆိုင်များ၊ ၄င်းတို့သည်ဒေဝါလီခံသောကုမ္ပဏီများမှပေးချေမည့် ငွေကိုစောင့်ဆိုင်း နေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ မစ္စတာအက်တမန်က ယခုနှစ်တွင်ဤသို့ပေးရန်ရှိသောကုမ္ပဏီမှာ ၆၆ ခုရှိပြီး အကြွေးစုစုပေါင်းမှာ ၁ ဘီလီယံ ကျော်မျှရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဤအမှုများမှာ ၄၉ ခုသာရှိခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန် College Of Bankruptcy မှဒါရိုက်တာ ကပြောသည်မှာ ယခုအခါဒုက္ခရောက်နေကြသော ကုမ္ပဏီများမှာ ဒေဝါလီမခံရမှီရပ်တည်နိုင်သမျှ ပန်ဒဲမစ် ရံပုံငွေ (Pandemic Reliet Fund) မှ ရသမျှငွေကလေး ပေါ်တွင် မှီခို၍ရပ်တည်နေကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ ထိုရံပုံငွေကုန်ဆုံးသွားချိန်တွင် ရှိသမျှရောင်းချ၍ မလောက်ငှ လျင် ဒေဝါလီခံရမည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ ထိုရက်များမှာ ရက် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုရက်များ ကို Covid-19 Clift တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
အစိုးရမှချေးငွေရသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဒေဝါလီခံရန် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းခွင့်ရသည်။ အကယ်၍ အစိုးရသတ်မှတ်သည့် အနေအထားများနှင့် ကိုက်ညီပါက ထိုချေးငွေများကို ဂရန့်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သူတို့သည်ငွေများကို ပြန်မပေးရဘူးဟုသေချာသည်အထိ စောင့်နိုင်ပြီးအကယ်၍ ဒေဝါလီခံရပါကလည်းလက် ထဲတွင်ငွေပို၍ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ အခန်း (၁၁) အရ ဒေဝါလီခံရန်အရေးမှာ ဥပဒေအရာရှိများနှင့် ရှေ့နေ များကို လုပ်ဆောင်ခပေးရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ငွေထုတ်ပေးသည့် (Creditor) ကုမ္ပဏီသို့လည်း ငွေပေးရဦး မည်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဒေဝါလီခံသည့်အနေအထားတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကြာကြာနေလေလေ ကုမ္ပဏီတခု လုံး (Liquidate) လုပ်ရရန်အခြေအနေ ပိုလေလေဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒုက္ခများမှာ အချိန်ပိုယူလေလေ၊ ပိုမို၍ ပြန့်ပွားသွား နိုင်ပြီး မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများ(Supplier) များမှာ ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဂျီအမ် (GM) ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံခဲ့ရာ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ပါက သူကို ထောက်ပံ့ပေး (Supply) လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ပေါင်းများစွာလစာမပေးနိုင်သည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
ဒေဝါလီခံခြင်းသည် ကုမ္ပဏီများကိုပိုက်ဆံကိုရိုက်ထုတ်မပေးနိုင်ပါ။ ရရာလူက ရသမျှဆွဲ၍ ယူနိုင်သဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ထိုအချိန်မျိုး၌ အကာအကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြာင့် ကုမ္ပဏီကို ကမ္ဘာပေါ်မှပျောက် မသွားစေရန် အကူအညီပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုသန်းလွင် - ဒေဝါလီခံရသောကုမ္ပဏီများ Reviewed by MoeMaKa on 12:09 PM Rating: 5